ကိုစိန်ထွန်း လက်ကိုင်ပ၀ါလေးဖြင့်မျက်ရည်စလေးများကိုသုတ်ရင်း ငိုသံပါကြီးဖြင့်ပြောလိုက်သည်.
“ သွားပါတော့ မြရေ သွားပါတော့ .အေးအေးချမ်းချမ်းသာ သွားပါတော့ ..”
ဘေးမှဒရိုင်ဘာကိုဘမောင်က ဆရာတပည့်ပီသစွာ ဖေးမနေသည်။.
“ စိတ်ထိန်းပါဆရာ စိတ်ကိုထိန်းပါ ...သွားလေသူကသွားပြီပဲ စိတ်ကိုထိန်းမှပေါ့ဆရာရယ်..” ပြောကာမှကိုစိန်ထွန်း ပိုဆိုးလာသည်...။
“ ငါရင်ကွဲတယ်ကွာ ..မောင် ဘယ်လိုဖြေရမလဲ မြရယ်..မောင်တစ်ယောက်ထဲမနေခဲ့ပါရစေနဲ့မြရယ်.. မြရေ ..မြရေ ”
ကိုစိန်ထွန်း ၏ မျက်ရည်များက တာကျိုးသည့်အလား ဒလဟော ကျနေသည်.။
ဘေးမှ အသုဘရှု့သူများကတော့ ကိုစိန်ထွန်းကို သနားဂရုဏာသက်နေကြသည်။
မြမြခင် ရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားသဖြင့် ကိုစိန်ထွန်း အရူးတစ်ပိုင်းဖြစ်နေရှာသည်ပေါ့ .။
အသုဘချနေစဉ်မိုးလေးကတစ်ဖျောက်ဖျောက်ကျလာသဖြင့် လိုက်ပို့သူအများ မြန်မြန်ကားပေါ်တက်၍
ကိုဘမောင် ဆရာလုပ်သူကိုဖေးမပြီး တွဲခေါ်လာပြီး ကားပေါ်သို့ တက်စေလိုက်သည်။
မိုးစက်များအောက်တွင် မြမြခင် ၏ အုတ်ဂူလေးမှာ ငြိမ်သက်စွာလဲလျောင်းလျက် ..
ကားများအားလုံးထွက်ခွာသွားပြီးနောက် .ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် ရပ်ထားသော ၈ျစ်ကား ထဲမှ
ခပ်ရွယ်ရွယ်အမျိူးသမီးတစ်ဦး ပန်းခြင်းကိုဆွဲကာ ဆင်းလာသည်။။
မြမြခင်၏ အုတ်ဂူထက်တွင် ပန်းခြင်း ကိုတင်လိုက်ပြီး မိုးရေများကြားတွင်ထိုင်ကန်တော့လိုက်သည်။
ပြီးနောက်တိုးတိတ်စွာ နှုတ်မှ ရေရွတ်လိုက်သည်။
“ မိမိရောက်လာပါပြီ မမကြီးရယ် ..မမကြီးအတွက်တရားမျှတ မှု့ကို မိမိ ပြန်ရှာပေးမှာပါ ..”
ထို့နောက် သူမ ခပ်သုတ်သုတ် လေး ကားဆီသို့ပြန်လာပြီး ကားပေါ်တက်ခါ ထွက်ခွာသွားတော့သည်။
“ ဆရာ ..ဆရာ အောက်ထပ်မှာ ဧည့်သည်ရောက်နေပါတယ် .
မမိမိခင်လို့ပြောပါတယ် မမမြရဲ့ ညီမပါတဲ့ .”
ကိုဘမောင် အပေါ်ထပ်သို့ အမောတကောတက်လာပြီး ဆရာလုပ်သူကိုသတင်းပို့သည်။
ကိုစိန်ထွန်း ထိုင်ရာမှ ထလိုက်ပြီး အေး. အပေါ်ကိုတက်လာခိုင်းလိုက် ဟုပြောခါ
“ မိမိခင်... မိမိခင်...”.
မိမိခင်ဆိုတာ မြမြခင်ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောညီမ.။ဘိလပ်တွင် ပညာသင်သွားနေသူ...
မြမြခင် နှင့်လက်ထပ် လိုက်သည့် သုံး နှစ်အတွင်းနာမည်သာကြားဖူးပြီး လူချင်းတစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးချေ..
မြမြခင် မိဘများကလဲ သူနှင့်မကြည်ဖြူ......
အချောအလှ မြမြခင် ..ပင်ယံထက်ကမြမြခင် .. ဖြူဖြူနွဲ့နွဲ့နှင့် အင်မတန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောမြမြခင် ကိုသူမျက်စိကျခဲသည်.ရအောင်ပိုးပန်းခဲ့သည်။
မြမြခင်မိဘများကသူနှင့်လုံးဝသဘောမတူသည့်အချိန်တွင် မြမြခင်ကို ကားတင်ပြေးခဲ့သည်.။
မြှာပွေသော လောင်းကစားဝါသနာထုံသော သူနှင့် အေးဆေးတည်ငြိမ်သောမြမြခင် လူကုံထံသမီး ကို ဘယ်မိဘသည် သဘောတူနိုင်ပါမည်နည်း ..
ယူပြီးပြီး အလှပေါ်အယဉ်ဆင့်မြင်တင့်ပါ ခင်နှမရယ် မောင် အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပါ့မယ်ဆိုသည့်အတိုင်းမြမြခင် သဘော မြမြခင် အလိုကျနေလိုက်သည်မှာ.မိဘများအကြိုက် မြမြခင်အကြိုက် နေလိုက်ရာ တလပင်မပြည့် မြမြခင်၏ မိဘများက သမီးလုပ်သူနှင့်သမက်ကို အိမ်ပေါ်ပြန်ခေါ်တင်ခါ ထားလိုက်သည်...
အကြံကြီးသော စိန်ထွန်းကိုဘယ်သူယှဉ်နိုင်ပါမည်နည်း တိုက်ဆိုင်မှု့ပေလော ... ကံစီမံရာပေလောပင်မသိချေ..
ကိုစိန်ထွန်းနှင့်မြမြခင် အိမ်ပေါ်ရောက်ပြီး ၂ လအကြာတွင် မြမြခင်၏ မိဘများမှာ မြင်းခြံ ဆေးလိပ်ခုံသို့ အသွားလမ်းတွင် ကားဘရိတ်ပေါက်ကာ နှစ်ဦးလုံး ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန်ကြသည်။
သမီး နှစ်ဦးရှိသည်တွင် အငယ်မ မိမိခင်မှာ ဘိလပ်တွင် ပညာတော်သင်သွားနေသည်က တစ်ကြောင်း
အိမ်စီးပွားရေးကို လုံးဝစိတ်မ၀င်စားပါဟူသော ခိုင်မာသည့်အဖြေကြောင့် မြမြခင်မှာ အလိုလိုနေရင် တစ်ဦးတည်းအမွေ ပိုင်ဖြစ်ရလေသည် ။
သို့သော်လည်း ညီမငယ်အတွက်ကိုမူ မြမြခင်က ရှေ့နေရှေ့ရပ်ဖြင့် ရပိုင်ခွင့်များတွက်ချက် လုပ်ကိုင်ထားပေးသည်။
ကိုစိန်ထွန်းက ဒါကိုမကျေနပ် . သူစိတ်မ၀င်စား ဘူးဟုပြောပြီးသားပဲ ကိုယ်တွေပဲအကုန်လုပ်နေရတာ ကိုယ်တွေပဲ ရသင့်သည်ဟု တွက်သည်။
အိမ်ထောင် ကျပြီး တစ်နှစ်အကြာတွင် မြမြခင် ကိုယ်ဝန်ရှိသည် .
ကိုယ်ဝန်ကြီးနှင့်အပြင်မသွားနိုင် ပွဲရုံများ ခြံများကိုမဦးစီးနိုင် သဖြင့် မြမြခင်နေရာတွင် ကိုစိန်ထွန်း အစားဝင်လာသည်။
“ မြရေ နေခဲ့နော် . မပေါ့မပါးကြီးနဲ့ကွာ မောင်ပဲလုပ်လိုက်ပါ့မယ် ” ဟု စိုးရိမ်ပိုတားမြစ်ချက်များနှင့် ကိုစိန်ထွန်းလုပ်ငန်းများကို တရားဝင်ဦးစီးတော့သည် ။
မြမြခင်ကိုယ်ဝန် ခုနှစ်လခန့်တွင် ကိုစိန်ထွန်းနယ် ဘက်သို့ခရီးသွားရာ မှ အပြန်တွင် အမျိူးသမီးတစ်ယောက် အိတ်တစ်လုံးနှင့်ပါလာခဲ့သည် ။. နာမည်က ၀င်းဝင်း တဲ့ ။
ထိုမိန်းမကို မြမြခင် မနှစ်မြို့ သူမ၏ အသွင်သဏန်ကိုမြင်လျှင်မြင်ချင်း နှစ်လို ဖွယ်မရှိချေ ..
အသားညိုညို ပုပြတ်ပြတ်နှင့် သွားအတန်ငယ်ခေါသယောင်ရှိသော်လည်း သွက်လက်ဟန်ရှိသည်..
တခါတလေတွင် သူမ၏အကြည့်များ ကိုစိန်ထွန်းအပေါ်တွင်ပိုင်စိုးပိုင်နင်း ကြည့်သယောင်နှင့်
မြမြခင်မနှစ်မြို့ပါ ။သူမကိုမကြိုက်နှစ်သက်သော်လည်း ကိုစိန်ထွန်း ၏ အမိန့်အရ
မပေါ့မပါးကြီးနှင့်မြမြခင်အတွက် နယ်ဘက်မှ သူ့ညီမ၀မ်းကွဲတစ်ယောက်ခေါ်ခဲ့သည်တဲ့ ။
အရပ်ဝမ်းဆွဲသင်တန်းဆင်း လဲဖြစ်ပြန်ရာ မြမြခင်အတွက်အရေးပေါ်လျှင် ကူညီနိုင်သည်ဟူသတဲ့ ..
၀င်းဝင်း မှာ အလုပ်လုပ်ရာတွင်တော့သေသပ်သည်။
သို့သော်လည်း မြမြခင်သည် ရှိရင်းစွဲအိမ်ထိန်းကြီးလဲဖြစ် မိဘများလက်ထက်မှခုထိတိုင် သူမအနားရှိနေသည့် ကြီးလှမှ လွဲပြီး သူမအခန်းသို့ ၀င်းဝင်းကိုအ၀င်မခံချေ။
“ အမြရေ ကြီးလှရွာပြန်ချင်လို့ကွယ် .အဲသဟာ ကြီးလှကိုပြန်ခွင့်ပြုနိုင်မလားလို့ .”.
မမေးစဖူး မပြောစဖူးသောမေးခွန်းကို ခွင့်တောင်းလာသော ကြီးလှကို အလန့်တကြားကြည့်မိသည်။
ကြီးလှသည် တစ်ကောင်ကြွက် .ဘ၀နှင့်မြမြခင်မိဘများလက်ထက်ကတည်းက သည်အိမ်တွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။
မြမြခင်ရော မိမိခင်ပါ ကြီးလှလက်ပေါ်တွင်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။
အိမ်မှာဒရိုင်ဘာ ဦးတင်နှင့်ပေးစားလိုက်သော်လည်း ကံမကောင်းရှာသောကြီးလှခမျာ ဦးတင် တီဘီရောဂါနှင့်ကွယ်လွန်သဖြင့် မုဆိုးမ ဖြစ်ရပြန်တကား ကြီးလှဘ၀သည် သူမတို့အိမ်တွင်ပင် မြှုပ်နှံလေတော့သည်။
သို့ပါလျှက်..နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခါမှ မြမြခင်တခါမှမကြားဖူးသောရွာ သို့ပြန်မည်ဆိုလာသဖြင့် မြမြခင် အံသြစွာ ကြီးလှကို ကြည့်ရင်းမေးလိုက်မိသည်.။
“ နေပါဦး ကြီးလှရယ် မြတို့တစ်သက် ကြီးလှဒီအိမ်မှာနေလာတာ ကြာလှပေါ့ ..ခုကြီးလှဘာဖြစ်လို့ရွာပြန်ချင်တယ်လို့ပြောရတာလဲ မြတော့နားမလည်နိုင် ပေါင် ..”
“ နောက်ပြီးမြမှာမပေါ့မပါးကြီးဆိုတာ ကြီးလှသိသားနဲ့ .ဘာလို့ဒီလိုပြောရတာလဲ .”
မြမြခင်ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် အလှပြင်ခုံသို့ ထသွားလိုက်သည်။. စိတ်တိုမိသည်.
ကြီးလှကတော့မျက်လုံးတွေကို ပြတင်းပေါက်ဖက်သို့ငေးကြည့်ရင်း“ ကြီးလှ ပြန်မှဖြစ်မယ် အမြလေးရယ် ..ကြီးလှလဲဘယ်သွားချင်ပါ့မလဲ .ကြီးလှမှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့ပါ အမြရယ် .....”
“ အို ..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြတော့သဘောမတူဘူးကြီးလှ..ကြီးလှသွားချင်ရင်တောင် မြ မျက်နှာမြင်ပြီးမှ သွားရမယ် ..ခုချိန်မှာ မိမိလဲအနားမှာမရှိဘူး .မြမှာဆွေမျိူးသားချင်းတွေကလဲ ကိုစိန်ထွန်းကို မတွေ့ချင်ကြလို့ ရှောင်နေကြတဲ့အချိန် မှာ မြအနားဘယ်သူရှိလဲကြီးလှ ..ပြောပါဦး .”
ပြောရင်းနှင့် မြမြခင်မျက်ရည်ကျသည်။ မြမြခင်မျက်ရည်ကျတာမြင်တော့ ကြီးလှ စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် သက်ပြင်းတချက်ရှိုက်ရင်း ဘီးစပတ်ကိုပြန်ပတ်လိုက်သည်။
“ ကဲပါ အမြလေးရယ် ကြီးလှမသွားသေးပါဘူး.အမြလေးမျက်နှာမြင်ပြီးမှပဲဆက်ပြောကြတာပေါ့ကွယ် ”..
ပြောရင်းနှင့် ကြီးလှအခန်းထဲမှ ထထွက်သွားသည်။ ကြီးလှနောက်ကျောပြင်ကိုကြည့်ရင်း မြမြခင် စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရသည်။
၀င်းဝင်း ရောက်လာပြီးမှ ကိုစိန်ထွန်းကလဲ အိမ်အပြန်ထမင်းစားမှန်သည်။
ကြီးလှကိုပင်မခူးခိုင်း သူ့ညီမကိုပဲခိုင်းမည်ဟု့ဆိုကာ ၀င်းဝင်းကို ပဲထမင်းခူးခိုင်းသည်။
အနားတွင် ၀င်းဝင်းက ယပ်တောင်ခပ်ပေးရင်း ဟင်းများခပ်ထည့်ပေးသည်။
.မြမြခင်က ကိုစိန်ထွန်း ပြန်လာချိန်ဆို အပေါ်ထပ်က လေသာဆောင်တွင်လေညှင်းခံနေတတ်ပြီး ကိုမြင့်ထွေးထမင်းစားချိန်မှ ဆင်းလာတတ်သည်.။
စားပွဲတွင် မြမြခင်ထိုင်နေလျှင်.. “ သြော် မြရယ် ဘာလို့ဆင်းလာတာလဲ မောင် စားပြီးတက်ခဲ့မယ်လေ .
ကဲအပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနားနော် ..ကဲကဲ ကြီးလှရေ မြအညောင်းမိနေမယ် လမ်းလေးဘာလေးတွဲလျှောက်ပေးပါဦး ကျွန်တော်စားပြီးမှ တက်လာခဲ့မယ် ..”
“ မြနော် ကိုယ်ဝန်ကိုဂရုစိုက်ရမယ်နော် ..အဲလိုမနေရဘူး”
ကိုစိန်ထွန်း အနားမှ ခွာရသည်။ ကြီးလှက ထမင်းစားပွဲဝိုင်းသို့ တချက်စောင်းကြည့်ပြီး မြမြခင်ကိုလာတွဲကာ အပေါ်ထပ်သို့ခေါ်ဆောင်လာရသည်။
ကြီးလှပြန်မယ့်သတင်းကို ကိုစိန်ထွန်း ကိုပြောပြမိတော့ ဂရုမစိုက်ဟန်ဖြင့် ...“ ပြန်ခိုင်းလိုက်လေမြ ..
သူပြန်ချင်နေတာပဲ အ၀င်းလဲရှိနေတာကို ..မြဘာလိုလို့လဲ မောင်လဲရှိနေတာပဲ ..
မြမြခင်..ကိုစိန်ထွန်း ကို အလန့်တကြားကြည့်လိုက်မိသည် .
“ အို ..မောင်ကလဲ မြ မျက်နှာမြင်တဲ့ထိတော့နေစေ့ချင်သေးတယ် ..မီးဖွားပြီးမှပဲ သွားခွင့်ပြုနိုင်မယ် ..ဒါမြအမိန့်ပဲ ”.
ကိုစိန်ထွန်း တချက်စောင်းပြီး ပြုံးလိုက်သည်.။
“ ကဲမြသဘောပါလေ ..မြလေးသဘောပါကွယ် .”.
သူမရင်ထဲတွင်ကိုစိန်ထွန်း ကိုလဲ မတင်မကျ ..ကြီးလှကိုလဲဘ၀င်မကျ ...
မြမြခင် ကိုယ်ဝန် ၈ ခန့်ဖြစ်နေလေပြီ ..မိုးပျံပူဖောင်းကြီးအလားသူမကိုယ်ဝန်ကြီးနှင့် မသွားနိုင်မလာနိုင်သမျှ ကိုစိန်ထွန်းသာ အကုန်ဦးဆောင် နေရလေပြီ.။
ခရီးများလဲမကြာခနသွား၏.. သွားတိုင်းပြန်လာတိုင်း မြမြခင်အတွက် တခုဆို ၀င်းဝင်းအတွက်လဲတစ်ခုဝယ်လာစမြဲ ..
အိမ်အပြန်တို့သည် .ညဉ့်နက်လေတိုင်း မြမြခင်မစောင့်နိုင်ရှာပဲ အိပ်ပျော်ရလေသည်။.
ကြီးလှသည်လဲတနေကုန်ပင်ပန်းရှာသည်ဖြစ်ရာ လူကြီးဖြစ်သည်ကတစ်ကြောင်း ကိုစိန်ထွန်း ပြန်လာချိန်မှာအင်မတန်ညဉ်နက်လေရာ မည်သူမျှမစောင့်နိုင်ပဲ အိပ်စက်ကြလေသည်။
သံဘာဂျာတံခါးကိုဖွင့်ပေးရန် အလိုအလျောက်တာဝန်ယူသူက ၀င်းဝင်း ..
တစ်ည................. မြမြခင်တစ်ယောက် ဗိုက်နာသလိုလိုသ ရိုးသရီနှင့် ခါးကိုက်သယောင်ယောင်ဖြစ်လာသဖြင့် ကြီးလှကို အော်ခေါ်လိုက်ရာ ကြီးလှမရှိ ..
သို့နှင့် အရမ်းဗိုက်မနာခင် ဆေးရုံသို့သွားရန် ကြီးလှကိုခေါ်မှ ဟူသော အတွေးဖြင့် မြမြခင်အောက်ထပ်သို့ ဆင်းလာခဲ့သည်. ။.အောက်ထပ်တခုလုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည် ။။
အနောက်ဖက် မီးဖိုဆောင်တွင် သာ မီးလင်းနေသည်။ သူမ တံခါးဝနားအရောက်တွင် ကြားရသောအသံ တချို့ကြောင့် လှမ်းသည့်ခြေလှမ်းများတုန့်ခနဲဖြစ်သွားသည်။..
ကိုစိန်ထွန်းအသံ ....နောက် ၀င်းဝင်းအသံ ..
သူမ လိုက်ကာအနားသို့အသာလေးကပ်သွားလိုက်သည်။ .မီးရောင်အောက်တွင် မြင်ရသည်က လူ ၂ ယောက် .ကိုစိန်ထွန်း နှင့်ဝင်းဝင်း.
၀င်းဝင်းက ကိုစိန်ထွန်းရင်ခွင်ထဲတွင် မခို့တယို့မှီနေသည်. ကိုစိန်ထွန်း အကျီ များကလဲ ကြယ်သီးများပြုတ်ထွက်နေပြီး ၀င်းဝင်းစိန် ရင်ဖုံးအကျီမှာလဲ ကြယ်သီးများက ဖရိုဖရဲ ပြုတ်ထွက်လျှက် ..
မီးရောင်အောက်တွင် အဆီပြန်မျက်နှာကိုစိန်ထွန်းနှင့် ၀င်းဝင်း တို့မျက်နှာများပေါ်တွင် ရာဂမီးများတောက်လောင်လျက်..............
၀င်းဝင်းက ကိုစိန်ထွန်း ရင်ခွင်ထဲတွင်မှီရင်း စကားပြောလိုက်သည်. “ ကိုကိုနော် .အ၀င်းတို့ဒီလိုကြီးနဲ့ဘယ်ချိန်ထိနေရမှာလဲ ခုချိန်ထိလဲဟိုအဘွားကြီးက မထွက်သွားသေးဘူး ..တော်တော် ကိုကို့မယားကြီး သိသွားမှ အ၀င်းတို့ဘာမှမရလိုက်ပဲ လက်ချည်းဖြစ်သွားမယ် ..
ညုတုတုခရာတာတာ အသံကိုကြားရသမျှ မြမြခင် ရင်ထဲ မြှားအစင်းတရာခန့်ပစ်လွတ်လိုက်သလို ခံစားလိုက်ရသည်။..
“ သြော် ဒင်းတို့လက်ချက်ကို မိုက်ရိုင်းလိုက်ကြတာ ...”.
ဒေါသတွေက မိုးသို့ တက်ပြီ ။.ကန်လန့်ကာအပြင်သို့ထွက်မည် ကြံလိုက်စဉ် ..
နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကြီးလှ..ခေါင်းခါပြပြီး အပေါ်သို့ဆွဲခေါ်သည်။။
မြမြခင်သဘောပေါက်လိုက်သည်.. ဖြေဖြေးချင်း လှေကားပေါ်သို့ပြန်တက်လာသည်..
အခန်းဝအရောက်တွင် မတော့ ..............
“ အားးးးးးးးးကြီးလှရေ ..နာလိုက်တာ .”
ခွေကျသွားသော မြမြခင်ကိုထိန်းရင်းကြီးလှငယ်သံပါအောင်အော်ရတော့သည်..
“ မောင်စိန်ထွန်းရေ ၀င်းဝင်းရေ ....လာကြပါဦးဟဲ့ ဒီမှာအမြ မွေးတော့မယ် လာကြပါဦး ..”
ကိုစိန်ထွန်းနှင့် ၀င်းဝင်းအပြေးတလွှားတက်လာကြသည်.ကိုစိန်ထွန်း မှာ လဲ မသေမသပ်နှင့်
၀င်းဝင်း သည်လဲ ကြယ်သီးများ တပ်ထားသည်မှာတလွဲစီ.............။
မြမြခင် ထိုမြင်ကွင်းကိုမုန်းတီးနာကျည်းစွာနှင့် မြင်နေရရင်းသတိလစ်သွားတော့လေ သည်..။
၄နာရီ ၀၀ မိနစ်
၃၁ ရက် ၇ လ ၂၀၁၂ ခုနှစ်
ဖတ်ကောင်းနေတုန်း အဲလိုတန်လန်းလုပ်တာ မကောင်းဘူးနော် စိတ်ဆိုးတယ်။ မျှော်...မျှော်...
တိုးလို့တန်းလန်းနဲ့ ဖီးလ်ပျက်လိုက်တာ၊ ကိုးရီးယားကားကို အားကျလို့လား ၊ ပြီးအောင်ရေးပါလားလို့ အဟင့်!
အာ... လုပ်ပြီ... ကောင်းခန်းရောက်မှ...:(
အဲ့လို့ လုပ်တာ ငရဲကြီးတက်တယ်နော်...:):)
ဆိုးလိုက်တာဗျာ.။ အဲ့လိုလူတွေကို သတ်ပစ်ချင်လောက်အောင်မုန်းတယ်.။ ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ နောက်တစ်ပိုင်းထပ်မျှော်လိုက်ဦးမယ်.။
နို့ မို့ ရင်ကျုပ်ကစိန်ထွန်းကိုပိတ်ထိုးမိတော့မယ်..။
ကျွန်တော့်အမြင်တော့....ကြီးလှ တစ်ယောက် ရုတ်တရက်ရွာကိုပြန်ချင်တယ်ဆိုတာကတော့.. ဇာတ်လမ်းရဲ့အလှည့်အပြောင်းအဖြစ်..မြှုပ်ကွက်တစ်ခုလို့ထင်မိပါတယ်။ နောက်ပြီး..၀င်းဝင်းအိမ်ကိုရောက်လာ တာဟာလဲ..ဇာတ်ရှိန်တက်စေဖို့..ဗီလိန်နေရာကနေ..ဆက်လက်သရုပ်ဆောင်မယ့်အနေအထားကိုလည်း..မြင်မိပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးအရှုပ်အရှင်းတွေအပြင်...မိမိခင် ရဲ့အမွေဆိုင်ကိစ္စ..ဒါမှမဟုတ်.ဇာတ်လမ်းအစမှာပြောဆိုကြိမ်းဝါးထားသလို....အစ်မအတွက် တရားမျှတမှုကိုပြန်ရှာပေးမယ်ဆိုထားတော့....မြမြသေဆုံးခြင်းဟာ..သာမာန်သွေးရိုးသားရိုး.မဟုတ်နိုင်ပြန်ဘူးလို့လဲ..ယူဆမိပါတယ်.... ဖောက်ပြန်မှု၊ လောဘတဏှာ၊ အမွေဆိုင်ကိစ္စတွေကိုလည်း..နောက်အပိုင်းမှာ...စိတ်ဝင်စားဖွယ်..ထပ်မံဖတ်ရှုရမယ်လို့လဲ...စောင့်မျှော်အားပေးလျက်ပါဗျာ......(ဖတ်ပြီး..ထင်မြင်တာလေးကို..ရေးကြည့်တာပါ..)
ဟဟ ........ကောင်းခန်းရောက်မှ တို့လို့တွဲလောင်းကြီး ဖတ်ရတဲ့လူ မျှော့နေဘီ ၊ အမြန်ရေးပါဗျို့ နို့မို့ မျှော်ရတဲ့လူ မျှော့တော့မယ် ..........တိန်
ကွန်နက်ရှင်ကျသွားတာမဟုတ်ပဲ မျှော်ပါဆိုတော့လဲ မျှော်ရတော့မှာပေါ့ ။
ဟာာာာ မီးစက်နှိုးကွာ ဇတ်လမ်းကကောင်းတုန်းရှိသေးတယ်
ကောင်းခန်းရောက်ရင် မျော့ဆိုဒါချည့်ဘဲး)။
အဟင့် ... ကိုစိန်ထွန်းလုပ်ရပ်ကြီးကို စိတ်နာနာနဲ့ comment အပီအပြင်ရေးတော့မယ် ပြင်ထားကာမှ “ဆက်ရန်ရှိသည် မျှော်တဲ့” ... တန်းလန်းကြီး ... ရက်ချက်ပ မမရယ် ... ဆက်ရန်ကို မျှော်နေမည် :P
ဇာတ်လမ်းကိုဆွဲထားတာတော့ လှသဗျ။ ဆက်ဖတ်ပါမယ်။ မဟုတ်တာတွေပေါ်တဲ့အထိပေ့ါဗျာ။ သူ့ညီမကပြန်လာနေပြီကိုး။
အဆက်များ တင်ပြီလားလို့ နောက်တစ်ခေါက် လာကြည့်တာ.. :)
တယ်ဟုတ်ပါလား၊ ရေးထားတာ၊ ကောင်းခန်းမှာမှ ဖြတ်ချရက်တယ်။ အစ်မလည်း အလုပ်တွေ ပိနေတာ အခုမှ စာတွေ လိုက်ဖတ်နေရတယ်။ ဆက်ရန်မျှော်နေပါမည်နော်။
ဖတ်ပြီး မန့်မရတာကခက်တာ ဒယ်အိုးရေ
ခုတလောအလုပ်များလို့ စာတွေ မဖတ်အားဖြစ်နေတာနဲ့အေ..
ခုမှ လာဖတ်တော့ ရှေ့မမီနောက်မမီဖြစ်နေလို့ ဒီကိုပြန်လာရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းတယ်ဟဲ့
မဟုတ်ရင် ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်နေမှာ.. ခုတော့ ဒုတိယပိုင်း ဆက်ဖတ်လို့ရပြီ...း)